🥇 ▷ Maxaa loo dabaaldegaa Maalinta Gamer? ✅
Maxaa loo dabaaldegaa Maalinta Gamer?
The Maalinta ciyaarta adduunka ee fiidiyowga ama sidoo kale loo yaqaan Maalin khamaar taasi Ogoosto 29Xaaladda jirta, in kabadan 2,300 milyan oo taageerayaal ah ayaa adduunka oo dhan ka qeyb gala.
Dhacdadani waxay muujineysaa koritaanka warshadaha ee PT videogame. Dhiniciisa, shirkadda Gamer waxay u dabaaldegaysaa in sannad kasta hawshani ay ku faafay waddamo kale, waana sababtaas maanta loo tixgeliyo inay tahay waxqabad caalami ah, sida ay tahayna. Maalinta Ciyaartoyda
Si kastaba ha noqotee 12-Sebtember dabaaldeg Maalinta ciyaarta fiidiyowga qarankaee Dalka Mareykanka. Taageerayaasha ciyaarta fiidiyowga waxay ku raaxeystaan ​​dalkan, xamaasad weyn, iyo dabcan, isla weynaan.
Warshadaha ciyaarta fiidiyowgu waxay sii waddaa inay koraan (waqtiga dhexe)
Videogame Waxaa loo beddelay bilowgiiba khibrado xiiso leh oo ay ku gaareen is-dhexgal 2D, oo la adeegsaday isticmaalkiisa sannadihii la soo dhaafay, taasoo horseedaysa horumarinta warshadaha waaweyn ee loo hibeeyay Dunida madadaalada.
World of videogames. Wuxuu soo qabtay tiro raaciyayaal ah oo aan la qiyaasi karin oo ku faraxsan adduunka weyn ee Gamer, sidaas darteed wuxuu rumeysan yahay inuu u dabaaldegay maalin gaar ah.
Asalka ciyaartoygu maalintaa
Dabaaldegan Maalinta Ciyaartoyda laga bilaabo sanadkaan 2008 Tani waxay kacdaa sababtoo ah majaladda ciyaarta fiidiyaha waxaa qoray Axel Springer (PlayManía, Hobby Consolas iyo PC Manía, seddex Isbaanish ah) Waxay go’aansadeen inay qaataan maalin gaar ah oo loogu dabaaldego oo lagu tijaabiyo ciyaarta adduunka iyadoo ah shaqo dhaqan oo ka jirta madaddaalo. Kuwani waa joornaalada ka dhiga inay maanta uga dabbaaldegaan waddamo badan.
Maalintaas waxaan u xusnaa dhammaan taageerayaasha ciyaarta. (cadeyn)
Bishii Oktoobar 1958 William Higinbotham, cilmiga fisikiska ee sheybaarka Qaranka ee Brookhaven, ayaa lagu qiimeeyaa abuurista. Tennis labo ayaa leh Robert Dvorak.
Dhanka kale, waxaa muhiim ah in la xuso in bisha Ogosto 1972. Woqooyiga Ameerika qormadii ugu horreysay ayaa la siidaayay, oo magac u bixisay Magnavox Odyssey,
Qolka ciyaartoygan, wali su’aalo ayaa jira Waa maxay qorshayaashaada inaad u dabaaldegto Maalinta Cayaaryahan? Ciyaartoyda ma loo tixgelin karaa inay tahay guul muhiim u ah ciyaarta?
(kuxiran) https://www.youtube.com/watch?v=bTPF7FP4T1k (/ embed)